Dhaxal sugaha UK Prince Charles oo la sheegay in laga helay cudurka coronavirus oo is… – Hagaag.com
Dhaxal sugaha UK Prince Charles oo la sheegay in laga helay cudurka coronavirus oo is…
Dhaxal sugaha Boqortooyada UK Amiir Charles (71) ayaa baaritaano lagu sameeyay lagu ogaaday in uu ku dhacay caabuqa halista badan ee Coronavirus sida lagu shaaciyay qoraal kasoo baxay Boqortooyada UK.
War saxaafadeed ka soo baxay Aqalka Clarence ayaa lagu sheegay in baaritaano lagu sameeyay dhaxa sugaha laga helay caabuqa Coronavirus, waxaana warka lagu sheegay in ay wanaagsan tahay xaalada Amiir Charles.
Baaritaano lagu sameeyay xaaska Amiirka ayaa lagu sheegay in laga waayay caabuqa Coronavirus, waxaana Boqortooyada UK sheegtay in amiirka iyo xaaskiisa ay is karaantiileen .
“Iyadoo la raacayo talada dowladda iyo adeegyada caafimaadka, Amiirka iyo xaaskiisa waxay isku go’doominayaan gurigooda ku yaalla Scotland, ma cadda weli qofka uu Amiirka ka qaaday fayraska iyadoo ay jirto in uu shaqo culus oo la xiriirta doorkiisa uu qaaday isbuucyadii la soo dhaafay.” ayaa lagu yiri War saxaafadeedka.
Cudurka Coronavirus ayaa noqday cudur aan kala saareyn dadka mansabka kala duwan ku fadhiya, waxaana cudurkan uu haleelay dad badan oo dunida magac ku leh ay ku jiraan, Madax, wasiiro, Xildhibaano, Fanaaniin , ciyaartoy iyo dad kale oo magac leh.
Cudurka Coronavirus ayaa asiibay dad gaarayo 420,897 qof adduunka oo dhan, waxaa ilaa hadda u dhintay 18,831 qof, oo u dhiganta 4.5% ee dadka cudurka qaba, waxaa ka kacay cudurka 108,520, oo u dhiganta 25% ee dadka cudurka qaba.